အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာ, တီဗီ & ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့် Post ကိုထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ: NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် - - - စာမျက်နှာ 30 2019 NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်းများ။ Show ကို 2019 NAB ။
2019 #NABShow - နေ့2အသုတ်စုံ
ဟိုင်း! : D မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် ...
2019 #NABShow: ကုန်ပစ္စည်း Spotlight ကို: HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR Blackmagic ဒီဇိုင်းအားဖြင့်
Blackmagic ဒီဇိုင်းကနေအသစ် HyperDeck လွန်ကဲ 8K HDR ကိုပြီးပြည့်စုံမျိုးစုံ soluti ဖြစ်လာသတ်မှတ် ...
2019 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2019 NAB ပြရန်၏ပထမဆုံးနေ့ - နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်မယုံကြည်သောသူတို့ပင်ဖြစ်သည် !!! အဆိုပါ ...
မြှားမီဒီယာအသင်းများခြီးမွှောမှဝင်ရိုး ai Software များနှင့်အတူ NetApp သိုလှောင်စုအဝေးကို
ဖြေရှင်းချက်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်ပညာရေးဗွီဒီယိုကို Mark မြင့်တက်မှုအတွက်မြင့်မားသောစွမ်းရည်နှင့်အမြန်ဝင်ရောက်ခွင့်လိုအပ်ချက်များကိုပစ်မှတ်ထား ...
2019 #NABShow: $ 1 ဘီလီယံနှင့်မဲရေတွက်, SPROCKIT startup ၏နောက်ဆုံးက Round ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
အဆိုပါ 2019 #NABShow at: SPROCKIT, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှိနေခြင်းသူကိုဖွင့်ကမ္ဘာ့ချိတ်ဆက်နေသည် ...
2019 #NABShow Adobe ကကြီးမားသော Creative Cloud ဖြန့်ချိကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်!
အဆိုပါ 2019 #NABShow: ရရှိနိုင်သောယခု! Adobe က Adobe က Creative Cloud စွမ်းဆောင်ရည် updates များကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နှင့်အသစ်ဈ ...
Show ကိုတိုက်ရိုက် NAB - 2019 ပြရန်ဇယား။ #NABShow @NABShow
ထုတ်လွှင့် Beat Las Vegas မှာနှစ်စဉ် NAB Show မှာ, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျင်းပဧပြီလ 6-1 ...
2019 NAB Show ကိုပါတီ & ပြီးနောက်-နာရီပွဲများစာရင်း: ပြရန်ပါတီများ NAB ။ #NABShow @NABShow
ကျနော်တို့ပြီးနောက်-ပါတီများအတွက် 2019 NAB Show ကိုဖော်ပြထားခြင်းမထားဘူးဆိုရင်ကျနော်တို့ t ကို၏ကြီးမားသောအတုံးအထဲကထွက်ခွာမည်ဖြစ်ကြောင်း ...
အားလုံး NAB Show ကိုအစားကောင်းကြိုက်သူများ Calling: Las Vegas စားသောက်ဆိုင်များ! #NABShow @NABShow
သငျသညျစာသားပင် Las Vegas မှာအသက်ရှူဖို့အဟောင်း 21 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်ကတည်းကကျနော်တို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသော၏ 21 ရွေးကောက်တော်မူပါတယ် ...
2019 #NABShow လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူသိပ်သည်းသော, အထဲကကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!
ဧပြီလ 2019th-6th ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော 11 #NABShow, လိုလားတဲ့အတှကျကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနှင့်ကုန်စည်ပြပွဲဖြစ်ပါတယ် ...
2019 #NABShow: TVU ကွန်ယက်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုများအတွက်အင်တာနက်အခြေပြု, Point-to-Point သို့ဂီယာစနစ်မိတ်ဆက်ခြင်း
တိုက်ရိုက်လွှ IP ကိုဖြေရှင်းချက်ထဲမှာ NAB 2019 TVU ကွန်ယက်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုခေါင်းဆောင်မှာ int ပါလိမ့်မယ် ...
Vizrt တစ်ဦးကို Global Powerhouse ဖွဲ့စည်းမှ Newtek ဝယ်ယူ!
Vizrt, မီဒီယာအကြောင်းအရာဖန်တီးသူများအတွက်အမြင်ဇာတ်လမ်းပြောပြ tool များ၏ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ပေးသူ, acq ရှိပါတယ် ...
30,000 ခြေတက် - ငါ #NABShow ငါ့လမ်းအပေါ်ပေါ့! @NABShow
... ထိုအပယ်သွားကြှနျုပျတို့သညျသှား! အခုအချိန်မှာငါ "သိန်စီးတီး & # 822 ငါ့လမ်းအပေါ်, သုံးဆယ်-တထောင်ခွကေိုထလေထုထဲတွင်ပေါ့ ...
all-စတား NAB ပြရန် Keynote တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမိုဃ်းတိမ်၌နယူးမြင့်စေရန်တိုက်ရိုက်အားကစားကြာပါသည်။ @NABShow #NABShow
- CBSi, Hulu, LA ကညှပ်, NASCAR နှင့် Pac-12 ကွန်ရက်ထံမှ Executives ဘယ်လိုမိုဃ်းတိမ်ကိုမီဒီယာထုတ်ဖေါ် ...
Magewell: အိုင်ပီဖို့အသွင်ကူးပြောင်းရေးလက်တွေ့ပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့ Making ။ @NABShow #NABShow
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကeနှင့်အတူ, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် IP ကို-based မီဒီယာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အသုံးပြုမှုများအတွက် Tipping အချက်ဖြစ်ခဲ့သည် ...
2019 #NABShow ပြသခဲ့သည် Spotlight ကို: Plura အသံလွှင့်
Plura အသံလွှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်တဲ့ကြီးကြပ်ပေးအပ်ခြင်းနဲ့ T ဖို့ဖြေရှင်းချက်အခြိနျဇယားများအတွက်လူသိများသည် ...
Virgo ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအုပ်စု Bitcentral အတွက် $ 10 သန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြေညာ
နောက်ဆုံးသြဂုတ်လနှင့်အောက်တိုဘာလငါ Bitcentral ရဲ့ groundbreaking FUELTM ပလက်ဖောင်းများနှင့်ဇအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် ...
1606 စတူဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းအဖြစ် Vicky Sornsilp ဘုံဘိုင်
ယခင်ကလုပ်-SF အမည်ရှိကို Creative စတူဒီယို, အစာရှောင်ရာက start မှချွတ်သည်။ ယခင်က-SF မြားဖှဲ့ SAN FRANCISCO- ဆန်ဖရန်စစ္စကို-based 1606 စတူဒီယို, ထုတ်လုပ်မှု၏ဦးခေါင်းအဖြစ်ဝါရင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုထုတ်လုပ်သူ Vicky Sornsilp ငှားရမ်းထားခဲ့သည်။ အဘယ်သူ၏နောက်ခံတစ်ခုမှာပြည်ထောင်စုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်သားရဲအယ်ဒီတာ့အာဘော်နှင့်အတူအကြီးတန်းရာထူးလည်းပါဝင်သည် Sornsilp, အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ Jon Ettinger, အယ်ဒီတာ / ဒါရိုက်တာ Doug Walker ကများနှင့်အယ်ဒီတာများဘရိုင်ယန် Lagerhausen နှင့်ကော်မက်ဒေါ်နယ်တို့ကပြီးခဲ့သည့်လကစတင်ခဲ့, စတူဒီယိုများအတွက်အယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှုပြီးစီမံကိန်းများကြီးကြပ်ပါလိမ့်မယ်။ Sornsilp ကြော်ငြာနှင့်အခြားကြော်ငြာမီဒီယာများအတွက် Post-ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်နက်ရှိုင်းသောအတှေ့အကွုံဆောင်တတ်၏, နှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဧရိယာအားလုံးကိုအဓိကအေဂျင်စီများများအတွက်စီမံကိန်းများ, နှင့်အခြားသောန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲထားပါတယ် ...
GatesAir: Pre-NAB Show ကိုဗီဒီယိုအင်တာဗျူး။ @GatesAir @NABShow #NABShow
တိုးမြှင့်ဖို့ကြိုးမဲ့ရောင်စဉ်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ Over-the-air ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အများပြည်သူဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆက်သွယ်ရေးများအတွက် GatesAir ဗိသုကာစျေးကွက်-ဦးဆောင်ဖြေရှင်းနည်းများ,
Goldcrest Post ကို Expand ရုပ်ပုံပြီးဆုံးစစ်ဆင်ရေး; ငှားရမ်း Colorist လိင်ရော်ဘင်ဆင်, ဖြည့်စွက် 4K ကပစ / HDR ကိုတန်းပြဇာတ်ရုံ
NEW YORK CITY- Goldcrest Post ကို, အဘယ်သူ၏မကြာသေးခင်ကခရက်ဒစ်, Indie ခေါင်းစဉ်ရုရှား Doll ချီးကျူးအနှောက်အယှက်မှဝမ်းနည်းပါတယ်, ကင်မရွန် Post ကို, ဇာတိသားတော်ကိုနှင့်အမြင့်ပျံငှက်၏ Miseducation န်ဆောင်မှုပြီးသွားသည်၎င်း၏ရုပ်ပုံကိုတိုးချဲ့နေပါတယ် features အသစ်တွေလည်းပါဝင်လွတ်လပ်သော Post-ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဝါရင့် colorist လိင်ရော်ဘင်ဆင်ကဆက်ပြောသည်ခဲ့ပြီး၎င်း၏လက်ရှိပြဇာတ်ရုံနှင့်အခြားဒစ်ဂျစ်တယ်အလယ်အလတ်ခန်းအပြင်, တစ်ဦးအသစ် State-Of-The-Art 4K ပြဇာတ်ရုံထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါရွေ့လျားအယ်ဒီတာအဖွဲ့, ရုပ်ပုံပြီးအသံလွှမ်းခြုံ post ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုထုပ်ပိုးရုပ်ရှင်နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာပူဇော်ရန်ကျယ်ပြန့်မဟာဗျူဟာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "ကျနော်တို့ကဖန်တီးမှုထုတ်လုပ်သူမှအယူခံဖို့ဒီဇိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုအတူတကွဆောင်ခဲ့ကြသည် ...
ပလက်တီနမ်Tools® 38 NAB ပြရန်စဉ်အတွင်းနယူးezEX®45 RJ2019 Connector လွှတ်တင်; ယခုရရှိနိုင်
NEWBURY ပန်းခြံ, ကာလီဖိုးနီးယား, မတ်လ 11, 2019 - ။ ပလက်တီနမ်Tools® (www.platinumtools.com), ဝါယာကြိုးများနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုး၏ပြင်ဆင်မှု, တပ်ဆင်ခြင်း, လက်စဲခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းတို့အတွက်ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်သစ်များ၏ပစ်လွှတ်ကြေညာဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် Las Vegas မှ, Nev ကျင်းပတဲ့ 38 NAB ပြရန်, စဉ်အတွင်းezEX®45 RJ2019 connector ကို။ တဲ # C8 သည် Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌ဧပြီ 11-11447 မှ။ "အခုမရရှိနိုင်ပါသည် ezEX38 RJ45 connector ကိုပုံမှန်အား Cat5e တှငျတှေ့သေးငယ် insulator တွင်လည်းချင်းများနှင့်သေးငယ် Cat6 cabling များအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေပါတယ်" ဟုယောဟန်ကို Phillips က, ပလက်တီနမ် Tools များ, Inc ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာကရှင်းပြသည်။ "ဒီezEX®38, တူညီတဲ့ထူးခြားတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံမူပိုင်မင်္ဂလာပါ-Lo မှားယွင်းဝန်ဘား features ...
အီရတ်ဂြိုဟ်တုရုပ်မြင်သံကြား Channel ကို, Dijlah တီဗီ, ပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေး Upgrade လုပ်ဖို့ Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များကိုရွေးကောက်ပြီး
Weybridge, ဗြိတိန်, မတ်လ 11th, ယနေ့ Dijlah တီဗီ, အီရတ်အတွက်အများဆုံးကြည့်ရှုသတင်းချန်နယ်များ၏တဦးတည်း, Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ '' လင်းပိုင်ပေါင်းစည်းရုပ်သံလိုင်း device ကိုရွေးချယ်တော်မူပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည် 2019 -Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ, တစ်ဦးဦးဆောင်အလိုအလျောက်, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ပေါင်းစပ်ရုပ်သံလိုင်းအထူးကု, ယင်းထုတ်လွှင့်လေထုကိုပိုပြီးလိုင်းများဆောင်တတ်၏အဖြစ်နှင့် Marina အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏ပလေးအောက်စစ်ဆင်ရေးအဆင့်မြှင့်တင်ရန်။ Stingray ၏တစ်ဦးကရှည်အချိန်အသုံးပြုသူတစ်ဦး box ကိုဖြေရှင်းချက် Dijlah တီဗီအတွက် Pebble သဲသောင်ပြင်စနစ်များ '' အစွမ်းထက်နှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းရုပ်သံလိုင်းစားသုံးမိပါ, content တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပလေးအောက်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုလွှမ်းခြုံကြောင့်ပျက်ကွက်မရှိတစ်ခုတည်းအမှတ်, အတူအပြည့်အဝမလိုအပ်တဲ့အလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ရှာဖွေနေခဲ့သည်။ အောက်မှာ operating ...
Austin-Peay State University တွင်လက်ကမ်းတွင်, Hitachi HDTV ကင်မရာများကိုနှင့်အတူပညာရေးဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံများဘဝမှကယျတငျ
သုံး Z-HD5000s ဝယ်ယူ, အားကစားရီနာကှငျးကနေသင်ကြားပို့ချရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယို Woodbury, နယူးယော့မှအကြမ်းခံ, အရည်အသွေးမြင့်ကင်မရာတက္ကသိုလ်ရဲ့အသုံးပြုမှုကိုချဲ့ထွင်မတ်လ 11, 2019 - Austin-Peay ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (APSU) မှာဆက်သွယ်ရေး၏ဦးစီးဌာနကျောင်းသားများကိုပူဇော်ဖို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ပါသည် ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အားကစားအသံလွှင့်စည်းကမ်းတစ်ခုအပြည့်အဝစစ်ခင်းကျင်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာ, လက်-အပေါ်အတွေ့အကြုံကို။ တက္ကသိုလ်ရဲ့အားကစားနယ်ပယ်တွင် Hitachi Kokusai လျှပ်စစ်အမေရိက, Ltd (Hitachi Kokusai) မှကင်မရာများနှင့်အတူအပြုသဘောအတွေ့အကြုံအပေါ်အဆောက်အအုံ, ဌာန၏အသစ်သုံးမျိုး Z-HD5000s purchasing ဖြင့်၎င်း၏သင်ကြားပို့ချရုပ်မြင်သံကြားစတူဒီယိုသို့ Hitachi ကင်မရာများ၎င်း၏အသုံးပြုမှုကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ Hitachi Kokusai အဆိုပါ 4409 NAB Show မှာတဲ C2019 အတွက်ပြပါလိမ့်မယ် ...
လက်ပံတက္ကသိုလ် EditShare သိုလှောင်ပတ်ဝန်းကျင်ရန်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြေးခုံပစ်ဦးစီးဌာနသည်ဂျာမဏီနိုင်ငံပန်းတိုင်
တစ်ခုတည်း node ကိုစကေးမှ UP ပြေးခုံပစ်ဦးစီးဌာနအဆင့်မြှင့်တင်ထုတ်အားကစားအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုဘော်စတွန်များအတွက် EditShare ပလက်ဖောင်း, MA - မတ်လ 11, 2019 - ယနေ့လက်ပံတက္ကသိုလ် (UP) ပြေးခုံပစ်ကြောင်း EditShare အသိဉာဏ်က Shared သိုလှောင်မှုအတွက်နည်းပညာခေါင်းဆောင်, QC နှင့်မီဒီယာစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဦးစီးဌာနသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမရဲ့ဘောလုံး, ဘော်လီဘော, ဘတ်စကက်ဘော, တင်းနစ်, လက်ဝါးကပ်တိုင်တိုင်းပြည်, လမ်းကြောင်း & လယ်ပြင်, ဘေ့စ်ဘောနှင့်လှေလှော်အပါအဝင် UP အားကစားသမားများအတွက်အားလုံးအကြောင်းအရာဖမ်းယူများအတွက် EditShare XStream EFS နဲတစ်ခုတည်း node ကို shared သိုလှောင်မှုပလက်ဖောင်းမှအဆင့်မြှင့်။ အဆိုပါ UP ပြေးခုံပစ်ဦးစီးဌာနပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်အသင်းများကို၎င်း၏ဘောလုံးကစားသမားမြောကျမတို့များအတွက်ကျယ်ပြန့်လူသိများသည်, UP ယူနိုက်တက်အတွက် 7th ရပ်တည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် ...
ProCo အသံ NAB 2019 မှာနောက်ဆုံးရ AC Power ဖြန့်ဖြူးကုန်ပစ္စည်းများခင်းကျင်းပြပေးပါရန်
Las Vegas, မတ် 7, 2019 - ProCo အသံတစ်ခု ACT / RHC အမှတ်တံဆိပ်, NAB 2019 (Booth C2949) မှာ AC Power ဖြန့်ဖြူးမှနောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ပြသလျက်ရှိဂီယာတို့တွင် PowerBOX, စတူဒီယိုအဆင့်ပြဇာတ်ရုံ (SST) စီးရီး, LunchBOX စီးဆင်းမှု-thru သေတ္တာများနှင့် ProPower RPD စီးရီးပုတ်နေသည်။ "ကျနော်တို့အစဉ်မပြတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများစွာသောလူအကြိုးရှိမညျဖွစျကွောငျးအနာဂတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းထွက်ပစ္စည်းများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားကြသည်," ဂျိမ်းစ် Davey, ပါဝါဖြန့်ဖြူး, ACT ၏ VP ကပြောပါတယ်။ "ဤနောက်ဆုံးပေါ် AC Power ဖြန့်ဖြူးရာပူဇော်သက္ကာနှင့်အတူကျနော်တို့ရရှိနိုင်သောအလုံခြုံဆုံး, အများဆုံးစွယ်စုံဖြေရှင်းချက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်အမေရိကန်နှင့်ကနေဒါတစ်လျှောက်လုံးကြောင်းထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုသူများကိုအာမခံပါသည်။ ကျနော်တို့ ...
နယူးအတွက် Wirecast ဖြန့်ချိစတော့အိတ်မီဒီယာစာကြည့်တိုက် Features
နီဗားဒါးစီးတီး, ကယ်လီဖိုးနီးယား, မတ်လ 11th, 2019 - Telestream, ဗီဒီယို၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး, Mac အတွက်၎င်း၏ဆုရတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ streaming များနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဆော့ဖ်ဝဲကိုအတွက် Wirecast ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် နဲ့ Windows ။ ဗားရှင်းအသစ် built-in 500,000 ထူးခြားတဲ့, အရည်အသွေးမြင့်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုကျော်တစ်ကြီးထွားလာဒေတာဘေ့စ်စတော့ရှယ်ယာမီဒီယာစာကြည့်တိုက်များအတွက်ထောက်ခံမှုပါဝင်သည်။ အဆိုပါလွှတ်ပေးရန်လည်းလူကြိုက်များ Rendezvous peer-to-peer ဝေးလံခေါင်သီ conferencing နှင့် Multi-site ကိုထုတ်လုပ်မှုအင်္ဂါရပ်မှ updates များကိုပါဝင်သည်။ တက်ကြွထောက်ခံမှု subscriptions ကိုအတူဖောက်သည်များအတွက်အသစ်တစ်ခုထုံးစံ-built ပေါ်တယ်မူပိုင်-အခမဲ့အသွင်ကူးပြောင်းမှု, ရွေ့လျားမှုနောက်ခံ, အသံကျောထောက်နောက်ခံတိုက်ရိုက် access ကိုပေးသည် ...
2019 NAB Show မှာ fiber-optic Links များ၏ Interlocking Bullet စီးရီးမှ MultiDyne ထပ်ပြောသည် Dante နဲ့ Ethernet Option ကို
ပိုမိုမြင့်မားသောအချက်ပြမှုများအတွက် High-bandwidth ကိုဗီဒီယိုကများအတွက် 12G Bullet လာရောက်ပူးပေါင်း, ပညာရှင်များနောက်ဆုံးမိနစ်ဗွီဒီယိုနဲ့အသံ feeds တွေကိုများအတွက်ပြဿနာ-ဖြေရှင်း, အလျင်အမြန်စကေးနိုင်ပါတယ် Hauppauge, နယူးယော့, မတ်လ 11, 2019 densities - MultiDyne fiber optic Solutions က၎င်း၏အသစ်က Bullet စီးရီးမိတ်ဆက်ပေးဦးမည် အဆိုပါ 2019 NAB Show မှာသေးသေးလေး, ကြမ်းတမ်း fiber-optic link ကိုထုတ်ကုန်များ၏ (ယခင် SilverBULLET) ။ Ethernet ဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုလည်းနိုင်စွမ်း - - NAB မှာ IBC မှာဖြန့်ချိက high-bandwidth ကိုဗီဒီယိုကများအတွက် 12G-နိုင်စွမ်း Bullet အပြင်, MultiDyne ဒီဂျစ်တယ်အသံတစ်ခုစက်မှုလုပ်ငန်း-ပထမဦးဆုံး Dante-enabled Bullet မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံးတီထွင်မှုဧပြီလကနေ Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌အ Booth C5013 မှာခင်းကျင်းပြသပါလိမ့်မည် ...
အိုင်ပီပို့ဆောင်ရေးကျော်အသံများအတွက်အသံလွှင့်နှင့် IT Convergence နေရပ်လိပ်စာမှ GatesAir Introduces Intraplex® Ascent
တက်နှစ်ခုပုံစံအချက်များအတွက် AES32, အင်နာလော့နှင့် AES3 လိုင်းများ၏လိုင်းများ 67 အထိထောက်ပံ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်လုံခြုံရေး Cincinnati များအတွက်လုံခြုံယုံကြည်စိတ်ချရသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (SRT) protocol ကိုမတ်လ 11, 2019 ကိုထောကျပံ့ဖို့စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ပထမဆုံးအသံ codec ဖြစ်ပါသည် - GatesAir တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင် ကြိုးမဲ့အတွက် Over-the-air ရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်မှုအတွက်အကြောင်းအရာပေးပို့ဖြေရှင်းနည်းများ, Intraplex®အထိပ်, အိုင်တီအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူထုတ်လွှင့်စစ်ဆင်ရေး၏ convergence အမှာစကားတဲ့အရွယ်မှာ, Multichannel အသံ IP ကိုကျော်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်လိမ့်မယ်။ စက်တင်ဘာလအတွင်း IBC မှာနည်းပညာသရုပ်ပြအဖြစ်မိတ်ဆက်သည် 2019 NAB Show ကိုပြီးပြည့်စုံအလုပ်လုပ်ဖြေရှင်းချက်၏တရားဝင်မိတ်ဆက်ခြေတစ်လှမ်းရခဲ့သည်။ တက်ကမ်းလှမ်း ...
Pronology Oscars®ရုပ်သံလိုင်းကိုများအတွက်ပံ့ပိုးမှုနှင့်အလိုလိုလုပ်ငန်းအသွားအလာ Solutions ပေးဖို့ Continues
ဟောလိဝုဒ်, CA, မတ်လ 11, 2019 - Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ '' နှစ်စဉ်OSCARS®ရုပ်သံလိုင်းကို၏အကယ်ဒမီကပြပွဲများတွင်နောက်ဆုံးပေါ်လုပ်ငန်းအသွားအလာ tools များရှိကြောင်းအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သော, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရုပ်ရှင်နိူးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များများအတွက်အများဆုံးမျှော်လင့်ချီးမြှင့်ပြသဖြစ်ပါသည် နေရာအရပ်။ အရာအားလုံးစဉ်အတွင်းပြပွဲသို့ဦးဆောင်သည့်လအတွင်းအဖြစ် On-site ကိုနောက်ကွယ်မှ-The-မြင်ကွင်းများလုပ်ဆောင်ချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်း၎င်း၏အစဉ်အလာကိုဆက်လက်, Pronology, tapeless လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်-အစွန်းဖြတ်တောက်တဲ့ developer ်နှင့်အကျိုးရှိစွာကြောင်းကိုသေချာ ထုတ်လုပ်မှုပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကသူ့ရဲ့အပြည့်အဝ suite ကိုအတူအဖြစ်အပျက်။ အဆိုပါထောက်ပံ့ပေးသည်၎င်း၏နဝမနှစ်တွင် ...
NAB 9971 မှာ Demo 2019 စီးရီး UHD မြင်ကွင်းစုံမှဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်
Champaign က, မကျန်းမမာ - ။ မတ်လ 11, 2019 - ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် Las Vegas မှာ, Nev အတွက် 9971 NAB ပြရန် (Booth SL2019) မှာလာမယ့်လစဉ် openGear ပလက်ဖောင်းများအတွက် UHD မြင်ကွင်းစုံ၎င်း၏အသစ်အ 9111 စီးရီးကိုသရုပ်ပြပါလိမ့်မယ်အသစ်ကတ်များပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့။ စားသုံးသူ-တန်း 4K မော်နီတာအပေါ်စီးပွားရေးစောင့်ကြည့်ရေးဘို့အချက်ပြခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုကို HDMI output ။ သုံးမော်ဒယ်များ - ထို 9971-MV18-4K 18 SDI သွင်းအားစု, ခြောက်လ SDI သွင်းအားစု, ခြောက် SDI လေးယောက် HDMI 9971 သွင်းအားစုနှင့်အတူ 6-MV4-971H-6K နှင့်အတူ 4-MV4-2.0K အတူ - အချက်ပြမှုများအမျိုးမျိုးလိုက်လျောညီထွေဖို့ဒီဇိုင်းနှင့် လျှောက်လွှာများ။ အဆိုပါ 9971 စီးရီး 12G / 6G / 3G / HD ကို / SD က-SDI နှင့် UHD1 3820 2160 စတုရန်းဌာနခွဲ (SDQS) ×ထောက်ခံပါတယ် ...
အယ်လ် Rayyan တီဗီ Dalet အပေါ်၎င်း၏အသံလွှင့်အနာဂတ်ဆောက်
Dalet က Galaxy ငါးခုလက္ကားအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ဒူဘိုင်း - မတ်လ 11, 2019 - Dalet, မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အကြောင်းအရာပညာရှင်များအဘို့အဖြေရှင်းချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့အယ်လ် Rayyan တီဗီ Channel ကိုပု Dalet က Galaxy ငါးခုမီဒီယာပလက်ဖောင်းအပေါ်မီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအပေါငျးတို့သဗဟိုမှသိရသည်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ အယ်လ် Rayyan မီဒီယာနှင့်စျေးကွက်ကုမ္ပဏီ, အယ်လ် Rayyan တီဗီများ၏လက်အောက်ခံအိမ်နှင့်ဒေသအလိုက်ထုတ်လုပ်ဖျော်ဖြေရေး, မဂ္ဂဇင်းများနှင့်သတင်း-oriented ပြပွဲတစ်ခုအကွာအဝေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့၎င်း၏ကာတာယဉ်ကျေးမှု programming ကိုလူသိများသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အဦများလုပ်ငန်း-wide ပြင်ဆင်ခြင်းဖို့ထုတ်လွှင့်မယ့်အပြောင်းအရွေ့၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ် ...
ဓါတ်ပုံပညာကိုပြသပါဘို့ Loupedeck နှင့်အတူ DigiBox မိတ်ဖက်
Harpenden ဗြိတိန်, 11 မတ်လ 2019 - DigiBox, ဦးဆောင်ဗြိတိန်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စျေးကွက်-ဦးဆောင်နည်းပညာများဖြန့်ဖြူး, ဗီဒီယို, နှင့်လိုလားသူ AV စနစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများထဲမှတည်းဖြတ် console ကိုပံ့ပိုးပေးသူ, Loupedeck နှင့်အတူတရားဝင်လက်တွဲကြေညာခဲ့သည်။ Loupedeck 133-16 မတ်လကနေ NEC ဘာမင်ဂမ်မှာဓါတ်ပုံပညာ Show မှာရပ်တည်ချက် (H19) ရက်နေ့တွင် Loupedeck + မှနောက်ဆုံးပေါ် software ကိုအဆင့်မြှင့်တင်သရုပ်ပြလိမ့်မည်။ Loupedeck အကျိုးသက်ရောက်မှု, Adobe က Photoshop ကို CC နဲ့ Skylum Aurora HDR အတွေ့အကြုံများပြီးနောက်ထုံးစံ-built သည့်အတွက် Adobe Lightroom တိုးတက်စေရန်, Adobe Premiere Pro ကို CC ကို, ကို Adobe ကြောင်းတည်းသောတည်းဖြတ်ရေး console ကိုပေးပါသည်။ ဒါဟာအငြိမ့်သည့် Ergonomics တိုးတက်စေခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏ output ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်အပျော်တမ်း photo- နှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက်ဖွ ...
MediaKind အားလုံး Vivo Fibra စာရင်းသွင်းသူကြွယ်ဝပြည့်စုံ OTT အတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Mediaroom တီဗီပလက်ဖောင်းသို့ Netflix နဲ့ App ကိုပေါင်းစပ်ပြီး
Telefonica ဘရာဇီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိပြီးသားအမွေ leverages - March11,2019 MediaKind ပေါင်းစည်း Mediaroom ဖြေရှင်းချက် Vivo Fibra IPTV ဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့် Netflix နဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုဝင်ရောက်ဖို့ဆောပိုလိုပြည်နယ်အနှံ့ 350,000 subscriber များအားကျော်ဖွအားလုံး Vivo Fibra စာရင်းသွင်းသူကြွယ်ဝပြည့်စုံ OTT အတွေ့အကြုံများကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ Mediaroom တီဗီပလက်ဖောင်းသို့ Netflix နဲ့ App ကိုပေါင်းစပ်ပြီး Mediaroom တီဗီကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော software ကိုပလက်ဖောင်းမှတဆင့်နည်းပညာ, ဗီဒီယိုကိုကိရိယာအားလုံး MediaKind တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာနည်းပညာခေါင်းဆောင်တစ်လျှောက်လာမယ့်မျိုးဆက်ကိုဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုများကိုကယ်နှုတ် MediaKind နှင့် Telefonica ဘရာဇီးအကြားကာလကြာရှည်မိတ်ဖက်များတိုးချဲ့ခြင်း linear နှင့် On-demand အပါအဝင် High-end စွဲငြိဖွယ်ရာတီဗီ features တွေ, ဖွင့် ယနေ့က Telefonica ဘရာဇီးနှင့်အတူပူးပေါင်းကြောင်းကြေငြာလိုက်သည် ...
IPE NAB Show မှာအဆင့်မြင့် IDS နှင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှုတခုအဖြစ်မှ
NAB ပြရန် 2019, Booth N4515 - IPE NAB ပြရန် 2019 မှာ Densitron ရဲ့တဲအပေါ် Intelligent Display ကိုစနစ် (IDS) ၏နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမီးမောင်းထိုးပြခြင်းဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင် Densitron ကနေရရှိနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်ပြသမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ရှည်လျားသောအသင်းအဖွဲ့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ Densitron IPE ရဲ့ Intelligent Display ကိုစနစ် (IDS), တစ်ဦး၏အရွယ်မှာ, ကွန်ယက်-based display နှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, Densitron ရဲ့လူကြိုက်များမြင်ကွင်းကျယ်ပြသမှုသို့ပေါင်းစည်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အထူးသ IPE ရဲ့ TS5 Touchscreen device ကိုတစ်ဦး IDS ကွန်ယက်ကိုကျော်, ခုနစျပါးအပျေါ-တဲဖန်သားပြင်မောင်း, ပေါင်းကင်မရာထိန်းချုပ်မှုနှင့် DMX အလင်းရောင်ပါလိမ့်မယ်။ ကုန်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးရေး Martyn ဘီလ်ဂိတ်၏ Densitron ကို Global ဒါရိုက်တာက high-ကုန်ကျစရိတ်စတူဒီယိုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏လုပ်ငန်းရှင်များပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, ကုန်ကျစရိတ်ရင်ဆိုင်ရ "ဟုပြောသည် ...
Cerberus NAB 2019 မှာမြောက်အမေရိကဈေးကွက်အဘို့ကြီးသောအကြောင်းအရာလွှတ်တင်နှင့်ကယ်တင်တတ်၏
NAB 2019, 6-11 ဧပြီလ Booth SL5624: Cerberus Tech မှကယခုနှစ် NAB Show မှာသုံးတော်လှန်ရေးသမားအိုင်ပီထုတ်ကုန်ကိုတင်ပြလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Cerberus ချက်ချင်းပြန်လာပြီးအတူဆန်းသစ်သော, IP ကို-based အလှူငွေနှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုကိုသရုပ်ပြအဖြစ် ပို. ပင်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အွန်လိုင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့အရာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၎င်း၏ client များဖွင့်ဖို့လက်ခံထားသောပလက်ဖောင်းပါဝင်သော၎င်း၏ '' လာမယ့်မျိုးဆက် '' Livelink ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဆန္ဒပြပွဲများ hosting ပါလိမ့်မယ်။ "အကြောင်းအရာအသိုင်းအဝိုင်းဖန်တီးဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာမှငွေဝင်နည်းလမ်းသစ်တွေဝေမျှဖို့စုသိမ်းဘယ်မှာ NAB ဖြစ်ပါတယ်" ဟုခရစ် Clarke, Cerberus ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတူထိုအဖြစ်အပျက်တက်ရောက်, ပွင့်လင်းအသံလွှင့်စနစ်များကိုအခွင့်အလမ်းပေးသော ...
30 ၏စာမျက်နှာ 919«ပထမဦးစွာ...1020«2829303132»405060...နောက်ဆုံး»
အပိုဒ်မော်ကွန်း လကိုရွေးချယ်ပါ မေလ 2019 (215) ဧပြီလ 2019 (503) မတ်လ 2019 (622) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (325) ဇန်နဝါရီလ 2019 (280) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (243) နိုဝင်ဘာလ 2018 (406) အောက်တိုဘာလ 2018 (496) စက်တင်ဘာလ 2018 (495) သြဂုတ်လ 2018 (397) ဇူလိုင်လ 2018 (876) ဇွန်လ 2018 (869) မေလ 2018 (871) ဧပြီလ 2018 (831) မတ်လ 2018 (779) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (684) ဇန်နဝါရီလ 2018 (605) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (396) နိုဝင်ဘာလ 2017 (712) အောက်တိုဘာလ 2017 (835) စက်တင်ဘာလ 2017 (608) သြဂုတ်လ 2017 (583) ဇူလိုင်လ 2017 (710) ဇွန်လ 2017 (543) မေလ 2017 (621) ဧပြီလ 2017 (695) မတ်လ 2017 (704) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (340) ဇန်နဝါရီလ 2017 (364) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (606) နိုဝင်ဘာလ 2016 (344) အောက်တိုဘာလ 2016 (556) စက်တင်ဘာလ 2016 (622) သြဂုတ်လ 2016 (1056) ဇူလိုင်လ 2016 (532) ဇွန်လ 2016 (414) မေလ 2016 (505) ဧပြီလ 2016 (713) မတ်လ 2016 (743) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (382) ဇန်နဝါရီလ 2016 (123) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (357) နိုဝင်ဘာလ 2015 (327) အောက်တိုဘာလ 2015 (152) စက်တင်ဘာလ 2015 (259) သြဂုတ်လ 2015 (440) ဇူလိုင်လ 2015 (276) ဇွန်လ 2015 (140) မေလ 2015 (128) ဧပြီလ 2015 (435) မတ်လ 2015 (289) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (298) ဇန်နဝါရီလ 2015 (131) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (103) နိုဝင်ဘာလ 2014 (194) အောက်တိုဘာလ 2014 (149) စက်တင်ဘာလ 2014 (381) သြဂုတ်လ 2014 (250) ဇူလိုင်လ 2014 (287) ဇွန်လ 2014 (363) မေလ 2014 (231) ဧပြီလ 2014 (744) မတ်လ 2014 (560) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (427) ဇန်နဝါရီလ 2014 (289) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (137) နိုဝင်ဘာလ 2013 (545) အောက်တိုဘာလ 2013 (290) ဇူလိုင်လ 2013 (26) မေလ 2013 (13) ဧပြီလ 2013 (1) မတ်လ 2013 (2)0(306)
လူမှုမီဒီယာ Manager ကို
ကို Creative International